Boeing akapomera 737 Max kubiridzira, kuripa madhora zviuru zviviri nezviuru mazana maviri emadhora
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing akapomera 737 Max kubiridzira, kuripa madhora zviuru zviviri nezviuru mazana maviri emadhora
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Boeing ichabhadhara mari yematsotsi inodarika madhora zviuru zviviri nezviuru mazana maviri, inoumbwa nemutongo wemari ye $ 2.5 mamirioni, muripo kubhadharo kune vatengi veBoeing 243.6 MAX yendege ye $ 737 bhiriyoni, uye kumisikidzwa kwemadhora mazana mashanu emamiriyoni evarombo-vanobatsirwa vanobhadhara mari yekubhadhara iyo vadyi venhaka, hama, uye vanobatsirwa zviri pamutemo nevatakuri 1.77 vakafa mutsaona yeBoeing 500 MAX yeLion Air Flight 346 neEthiopia Airlines Ndege 737
Boeing Company (Boeing) yapinda muchibvumirano neDhipatimendi rezvemitemo kugadzirisa mhosva yekuparwa mhosva yekubiridzira iyo Federal Aviation Administration's Aircraft Evaluation Group (FAA AEG) maererano neFAA AEG kuongororwa kweBoeing's 737 MAX ndege .
Boeing, US-based multinational corporation inogadzira, inogadzira, uye inotengesa ndege dzekutengesa kunhandare dzendege pasirese, yakapinda muchibvumirano chekumisikidzwa chakamisikidzwa (DPA) maererano neruzivo rwematsotsi rwakamhan'arwa nhasi muNorth District yeTexas. Ruzivo rwematsotsi rwunopa kambani mhosva imwe yekuverengera kubiridzira United States. Pasi pemitemo yeDPA, Boeing ichabhadhara mari inokwana madhora zviuru zviviri nezviuru mazana maviri zvemhosva, inoumbwa nemutongo wemari inosvika madhora zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nenhatu, muripo kubhadharo kune vatengi veBoeing 2.5 MAX yendege ye $ 243.6 bhiriyoni, uye kumisikidzwa kwengozi yemamirioni mazana mashanu emadhora. -victim vanobatsirwa mari yekubhadhara vadyi venhaka, hama, uye vanobatsirwa zviri pamutemo nevatasvi 737 vakafa mutsaona yeBoing 1.77 MAX yeLion Air Flight 500 neEthiopia Airlines Ndege 346.
“Tsaona dzinosuruvarisa dze Shumba Air Ndege 610 uye Ethiopian Airlines Ndege 302 yakaburitsa hunyengeri nehunhu hwevashandi veimwe yevatengesi vendege vanotungamira pasi rose, "akadaro Acting Assistant Gweta General David P. Burns weDhipatimendi reJustice reCriminal Division. "BoeingVashandi vakasarudza nzira yemhindu pane kuvanzika nekuvanza ruzivo rwezvinhu kubva kuFAA maererano nekushanda kwendege yayo 737 Max uye vachiedza kuyedza kunyengedza kwavo. Chisarudzo ichi chinoita kuti Boeing vazvidavirire pamabatiro evashandi vayo, inokanganisa mashandisiro emari kuvatengi veBoing yendege, uye netarisiro yekupa imwe muripo kumhuri dzevakarohwa nenjodzi nevanobatsirwa. ”
"Mashoko anotsausa, hafu yezvokwadi, uye kusiiwa zvakaziviswa nevashandi veBoeing kuFAA zvakatadzisa kugona kwehurumende kuona kuchengetedza kwevanhu vanobhururuka," akadaro Gweta reUS Erin Nealy Cox yeNorth District yeTexas. "Nyaya iyi inotumira meseji yakajeka: Dhipatimendi rezvemitemo richaita kuti vagadziri vakaita saBoeing vazvidavirire pakubiridzira vatongi - kunyanya mumaindasitiri ari mumatanda akakwirira kudai."
"Chibvumirano chemazuva ano chekumhan'ara chakanonoka chinopa Boeing nevashandi vayo kuzvidavirira nekusavimbika kwavo neFAA maererano neMCAS," akadaro Special Agent in Charge Emmerson Buie Jr. weFBI's Chicago Field Office. “Zvirango zvakakura uye muripo Boeing achabhadhara, zvinoratidza mhedzisiro yekutadza kunyatsoita zviri pachena nevatongi vehurumende. Veruzhinji vanofanirwa kuva nechivimbo chekuti vatongi vehurumende vari kuita basa ravo nemazvo, uye avo vavanotungamira vari kutaura chokwadi uye vachijekesa. ”
"Tinoramba tichichema pamwe chete nemhuri, vadikani, uye neshamwari dzevanhu makumi matatu nematanhatu vakafa paLion Air Flight 346 neEthiopia Airlines Flight 610. Chibvumirano chakadzoserwa chekumhan'arwa chakasvikwa nhasi neThe Boeing Company mhedzisiro yeHofisi yaInspector General's takazvipira kushanda pamwe nevatevedzeri vedu vemitemo, ”akadaro Special Agent in Charge Andrea M. Kropf, Department of Transportation Office of Inspector General (DOT-OIG) Midwestern Region. "Ichi chibvumirano chakadzoserwa chekupomerwa chinoramba chichiyeuchidza nezvekukosha kwakanyanya kwekuchengeteka muindasitiri yendege, uye kuti kuvimbika nekujekesa hazvingambopihwa kuita zvakanaka kana purofiti."
Sekubvuma kwakaita Boe mumagwaro ematare, Boeing - kuburikidza nemaviri ayo 737 MAX Flight technical Pilots - akanyengedza iyo FAA AEG nezve chikamu chakakosha chendege chinonzi Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) chakakanganisa hurongwa hwekudzora ndege yeBoeing 737 MAX. Nekuda kwekunyengera kwavo, gwaro rakakosha rakaburitswa neFAA AEG rakashaiwa ruzivo nezve MCAS, uyezve, zvinyorwa zvendege uye zvekudzidzisa kutyaira kwendege dzeUS-zvakashaiwa ruzivo nezve MCAS.
Boeing yakatanga kuvandudza nekushambadzira iyo 737 MAX mukati kana munenge muna Chikumi 2011. Mberi yendege yeUS-based isati yokwanisa kushandisa 737 MAX nyowani, mirau yeUS yaida iyo FAA kuongorora uye kubvumidza ndege kuti ishandiswe mukutengesa.
Mukuita neichi chiitiko, iyo FAA AEG yaive yakanyanya kuve nebasa rekumisikidza hushoma huwandu hwedzidzo yekutyaira inodikanwa kuti mutyairi abhururuke 737 MAX yendege yeUS-based, zvichibva pahunhu uye kukura kwemisiyano pakati pe737 MAX uye iyo yekutanga vhezheni yendege yeBoeing 737, iyo 737 Inotevera Chizvarwa (NG). Pakupera kweongororo iyi, iyo FAA AEG yakaburitsa iyo 737 MAX Flight Standardization Board Report (FSB Report), yaive neruzivo rwakakodzera nezve zvimwe zvikamu zve ndege uye masystem ayo Boeing aifanirwa kuisa mumabhuku emhepo uye zvekudzidzisa kutyaira ndege kune ese US -bhesi dzendege. Iyo 737 MAX FSB Chirevo yaivewo neiyo FAA AEG misiyano-kudzidziswa kutsunga. Mushure mekunge 737 MAX FSB Report yaburitswa, vatengi veBoeing yendege vakabvumidzwa kubhururuka iyo 737 MAX.
Mukati meBoing, 737 MAX Flight technical Team (inoumbwa ne737 MAX Flight technical Pilots) yaive nebasa rekuziva nekupa iyo FAA AEG ruzivo rwese rwakanangana neFAA AEG maererano neFAA AEG kuburitswa kwe737 MAX FSB Chirevo. Nekuti kudzora kwendege kwaive kwakakosha pakubhururuka nendege dzazvino dzekutengesa, mutsauko uripo pakati peanodzora kubhururuka kweiyo 737 NG uye iyo 737 MAX yainyanya kukosha kuFAA AEG nechinangwa chekuburitswa kwayo 737 MAX FSB Report uye iyo FAA AEG misiyano- kudzidzisa kutsunga .
Mukati uye munenge munaNovember 2016, vaviri veBoing's 737 MAX Flight technical Pilots, mumwe aimbove 737 MAX Chief technical Pilot uye mumwe anozove 737 MAX Chief technical Pilot, vakawana ruzivo nezve shanduko yakakosha kuMCAS. Panzvimbo pekugovana ruzivo nezve shanduko iyi neFAA AEG, Boeing, kuburikidza neaya maviri mairi 737 MAX Flight technical Pilots, vakavanza ruzivo urwu uye vakanyengera iyo FAA AEG nezve MCAS. Nekuda kwekunyepedzera uku, iyo FAA AEG yakabvisa ruzivo rwese nezve MCAS kubva mune yekupedzisira vhezheni ye737 MAX FSB Report yakaburitswa muna Chikunguru 2017. Nekudaro, zvinyorwa zvendege uye zvekudzidzisa kutyaira kwendege dzekuUS-zvakashaiwa ruzivo nezveMCAS, uye vatyairi vanobhururuka iyo 737 MAX yevatengi veBoeing yendege havana kupihwa chero ruzivo nezve MCAS mumabhuku avo uye zvekudzidzisa.
Musi wa Gumiguru 29, 2018, Lion Air Flight 610, iyo Boeing 737 MAX, yakadonha nguva pfupi yapfuura kusimuka muGungwa reJava padhuze neIndonesia. Vese 189 vafambi nevashandi vari muchikepe vakafa. Kutevera kuparara kweShumba Mhepo, iyo FAA AEG yakadzidza kuti MCAS yakaitwa panguva yekufamba uye inogona kunge yakaita chinzvimbo mukupunzika. Iyo FAA AEG yakadzidza zvakare kekutanga nezve shanduko kuenda kuMCAS, kusanganisira ruzivo nezveMCAS iyo Boeing yakavanda kubva kuFAA AEG. Zvichakadaro, apo kuferefetwa kwenyonganyonga yeLion Air kwakaramba kuchienderera, iwo mairi mairi 737 MAX Flight technical Pilots akaenderera mberi achitsausa vamwe - kusanganisira kuBoing neFAA - nezve ruzivo rwavo rwemberi rwechinjiso kuMCAS.
Musi waKurume 10, 2019, Ethiopian Airlines Flight 302, iyo Boeing 737 MAX, yakarova nguva pfupi yapfuura kusimuka pedyo neEjere, Ethiopia. Vose 157 vafambi nevashandi vari muchikepe vakafa. Ichitevera iyo Ethiopian Airlines tsaona, iyo FAA AEG yakaziva kuti MCAS yakaitwa panguva yekufamba uye inogona kunge yakaita chinzvimbo mukuparara. Musi waKurume 13, 2019, iyo 737 MAX yakagadzwa zviri pamutemo muUS, ichimisa nekusingaperi dzimwezve ndege dzendege neiyi US-based ndege.
Sechikamu cheDPA, Boeing akabvuma, pakati pezvimwe zvinhu, kuenderera mberi nekushandira pamwe neChikamu Chekubiridzira mune chero kuferefeta kunoenderera kana kwekumberi kwekuferefeta nekutongwa. Sechikamu chekushandira pamwe kwayo, Boeing inofanirwa kumhan'ara chero humbowo kana mhosva yekutyorwa kwemitemo yekubiridzira yeUS inoitwa nevashandi veBoeing kana vamiririri kune chero epamutemo kana vekunze hurumende agency (kusanganisira iyo FAA), mutongi, kana chero wevatengi veBoeing yendege. Uye zvakare, Boeing yakabvuma kusimbisa chirongwa chayo chekutevedzera uye kusimudzira zvinodiwa kutevedzera chirongwa chekuteerera, izvo zvinoda kuti Boeing isangane neChikamu Chekubiridzira kanokwana katatu uye kuti vaendese mishumo yegore kuChikamu Chekubiridzira maererano nemamiriro ekugadzirisa kwayo, mhedzisiro yekuyedza kwayo chirongwa chekuteerera, uye zvido zvayo zvekuona kuti chirongwa chayo chekuteedzera chakagadzirwa zvine musoro, chikaitwa, uye chakamisikidzwa kuitira kuti chive chinoshanda pakudzivirira nekuona kutyorwa kwemitemo yekubiridzira yeUS zvine chekuita nekudyidzana nechero yehurumende kana yekunze agency agency. (kusanganisira iyo FAA), mutongi, kana chero yevatengi vayo vendege.
Dhipatimendi rakazosvika pachisarudzo ichi neBoeing zvichibva pazvinhu zvinoverengeka, zvinosanganisira mhando uye kukomba kwemabatiro emhosva; Kukundikana kwaBoeing panguva yakakodzera uye nekuzvidira - kuzivisa mhosva yekukanganisa kubazi; uye nhoroondo yeBoeing yekutanga, kusanganisira chibvumirano chehurumende cheFAA kubva muna 2015 chine chekuita nekuchengetedza uye nenyaya dzehunhu zvine chekuita neBoing's Commerce Ndege (BCA) bhizinesi unit. Pamusoro pezvo, nepo kudyidzana kwaBoing kwakazopedzisira kwaisanganisira nekuzvidira uye nekushingaira kuzivisa Chikamu cheKubiridzira chingangove magwaro akakosha uye zvapupu zveBoing, uye vachizvidira kuronga humbowo hwakawanda hwekuti Boeing yaisungirwa kuburitsa, kubatana kwakadaro, zvakadaro, kwakanonoka uye kwakangotanga mushure memwedzi mitanhatu yekutanga. yekuferefetwa kwechikamu cheKubiridzira, panguva iyo mhinduro yaBoing yakagumburisa kuferefetwa kweChipenga.
Dhipatimendi rakafungawo kuti Boeing yakaita matanho ekugadzirisa mushure mekuita kwekukanganisa, kusanganisira: (i) kuumba komiti inochengetedzwa yeacospace yekuchengetedza yeBhodi revatungamiriri kuti itarise marongero nemaitiro eBoeing anotonga kuchengetedzeka pamwe nekudyidzana kwayo neFAA nemamwe masangano ehurumende uye vatongi; (ii) kugadzira Chigadzirwa uye Sevhisi Sangano rekuchengetedza kusimbisa nekuisa pakati mabasa ane chekuita nekuchengetedza ayo aimbove akawanikwa munzvimbo yeBoeing; (iii) kuronga zvakare Boeing'sinjiniya yekuita kuti vese mainjiniya eBoeing, pamwe neBoeing's Flight technical Team, vataure kuburikidza naBeeing maininjiniya kwete kumabhizimusi mayuniti; uye (iv) kuita shanduko yemamiriro kuBoing's Flight technical Team kuti iwedzere kutarisa, kushanda, uye hunyanzvi hweBoing's Flight technical Pilots, kusanganisira kufambisa Boeing's Flight technical Team pasi peimwechete amburera yesangano seBoeing's Flight Test Team, uye kutora marongero matsva nemaitiro. uye kuitisa rovedzo kujekesa zvinotarisirwa uye zvinodiwa kudzora kutaurirana pakati peBoing's Flight technical Pilots nezviremera zvekutonga, kusanganisira kunyanya iyo FAA AEG. Boeing yakaitawo shanduko dzakakura kuhutungamiriri hwayo hwepamusoro kubva pakaitika mhosva.
Dhipatimendi rakazopedzisira razviona kuti ongororo yekuzvimirira yakazvimirira yakanga isingakoshi zvichibva pazvinhu zvinotevera, pakati pezvimwe: (i) kusazvibata kwaive kwakapararira musangano rose, kana kuitiswa nevazhinji vashandi, kana kufambiswa nevatungamiriri vakuru; (ii) kunyangwe vaviri veBoing's 737 MAX Flight technical Pilots vakanyengedza iyo FAA AEG nezve MCAS nenzira yekutsausa zvirevo, hafu-chokwadi, uye kusiiwa, vamwe muBoinging vakazivisa kuwedzera kweCMAS kune vamwe vakasiyana veFAA vaive nebasa rekuona kana 737 MAX yakasangana neUS federal airworthiness zviyero; (iii) mamiriro ekuvandudza kweBoing kuchirongwa chekuteerera uye kutonga kwemukati; uye (iv) Chibvumirano cheBoeing chekusimudzira kutevedzera chirongwa chekuteerera zvinodiwa, sezvakatsanangurwa pamusoro.
Iwo mahofisi emumunda eChicago eFBI neiyo DOT-OIG akaongorora nyaya iyi, nerubatsiro rwemahofisi emunda eFBI neDOT-OIG.
Trial Attorneys Cory E. Jacobs naScott Armstrong uye Assistant Chief Michael T. O'Neill weChitsotsi Chikamu uye Mubatsiri weGweta reUnited States Chad E. Meacham wedunhu rekuchamhembe kweTexas vari kupomera nyaya iyi.